Xiaomi Mi 9 wuxuu leeyahay badhanka Kaaliyaha Google | Androidsis
Xiaomi Mi 9 wuxuu leeyahay badhanka Kaaliyaha Google
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Xiaomi
Waxaan sii wadeynaa inaan helno macluumaadka iyo xaqiiqooyin cusub oo ku saabsan Xiaomi Mi 9. Kadib markaan si rasmiya u ogaadey muuqaalka muuqaalka xiisaha leh iyo naqshad horay ugu dhacday jacayl badan. Si tartiib tartiib ah ayaan wax uga baranaynaa casrigaan casriga ah ee lala yaabay. Taasi waa heerka rajada ee ay sababi karto tirada boos celiska ah ee terminaalkan ayaa horeyba uga batay 100.000.
Guul kale oo ka timid Xiaomi oo sii wadda inay si aan macquul ahayn u fuusho xagga sare ee suuqa. Hadda waan ogaanay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan ka heli karno heerka qalabka aalad hubaal noqon doonta mid ka mid ah soojiidashada weyn ee MWC-ga soo socda.
Dhamaan Google ee adeegaaga adoo riixaya badhanka ku yaal Xiaomi Mi 9
Waxaa jira taleefannada casriga ah ee aan waxbadan ka ogaanno, ugu yaraan si rasmi ah, ka hor soo bandhigiddooda. Kaliya waa inaad raacdaa daabacaadda warbaahinta bulshada ee ku saabsan astaamaha shirkadda si aad u sii wadato barashada badan ee Mi 9. Mid ka mid ah daabacaadaha ugu xiisaha badan, taas oo ka baxsan sawirrada naqshad aad u wanaagsan oo la gaadhay, ayaa tan ka mid ah Badhanka heeganka ah ee Kaaliyaha Google. U dhowaanshaha Google iyo go'aan muhiim ah oo hubaal u adeegi doona adeegsadayaal badan oo kaaliyaha Google ah si ay go'aan uga gaaraan qalabkan.
En ballanqaad cad oo loogu talagalay kaaliyaha codka ee ugu caansan suuqa, Xiaomi wuu sameeyaa madax weyne weyn 'G' U fidinta isticmaalaha badhan gaar u ah Kaaliyaha Google. Horaan u aragnay taleefannada casriga ah ee kale ee suuqa yaalla oo leh badhanno la garan karo. Telefoonada leh badhannada "duurjoogta" oo aan ugu xilsaari karno amarro kala duwan iyadoo loo eegayo isticmaalka aan siin doonno qalabka qaarkood sida kamaradda.
Xitaa shirkadaha sida Samsung xitaa waxay ku dareen badhan loogu talagalay kaaliyaha codka qaar ka mid ah qalabkooda. In kastoo kiiskan loogu talagalay kaaliyaha codka shirkadda u gaarka ah. Xiaomi waxay noqoneysaa xitaa mid caalami ah iyadoo lagu sharraxayo Kaaliyaha Google. Kaaliyaha codka ee horumarka buuxa iyo koritaanka taas oo ka dhigi doonta Xiaomi Mi 9 xitaa mid aad u badan oo tartan ah. Haysashada shaqooyin badan iyo marin toos ah u helista kaaliyaha aan jecel nahay oo leh badhan ayaa u adeegta in la dhaliyo dhibco intaas ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi 9 wuxuu leeyahay badhanka Kaaliyaha Google
WhatsApp wuxuu tijaabiyaa algorithms-ka gobollada ay ku shaqeeyaan